घरमा पार्केटिङ गर्ने हो? यस्तो छ फाइदा र मूल्य :: Setopati
घरमा पार्केटिङ गर्ने हो? यस्तो छ फाइदा र मूल्य कस्ता-कस्ता पार्केट छन् बजारमा?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, फागुन ४
समयअनुसार घरको भुइँ पनि विभिन्न तरिकाले सजाउने चलन आइसकेको छ। उपभोक्ताले विकल्प पनि खोजिरहेका छन्। भुइँमा कार्पेट राख्ने चलन पुरानो भइसक्यो। बरू कार्पेट हटाएरै पार्केटिङ गर्नेको संख्या बढ्दो छ।
पार्केटिङले घरलाई कलात्मक र सुन्दर राख्न सहयोग गर्छ। काठको पार्केटिङले प्राकृतिक महशुस पनि गराउने उपभोक्ताको अनुभव छ।
सफा गर्न सजिलो, चिसो-तातोमा खास असर नपर्ने, कीरा-धमिरा वा सामान्य पानीले असर नपार्ने र धेरै टिकाउ हुनेजस्ता पार्केटका विशेषताले यसलाई लोकप्रिय बनाउँदै लगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
हाम्रो बजारमा मुख्यगरी तीन प्रकारको पार्केट पाइन्छ।
-पूरा काठको पार्केट।
-काठको धूलो (कुड) मा प्लास्टिक लेमिनेटेड।
-र, पिभिसी (बाक्लो प्लास्टिक) को।
यी तीन वटैले आफ्नै विशेषतासहित बजारमा स्थानमा जमाएका छन्। पार्केटका प्रकार, मूल्य र गुणस्तरबारे हामीले सबैखाले पार्केट आपूर्ति गर्दै आएको 'एभ्रिघर प्रा.लि' का निर्देशक राजेश ढकालसँग जानकारी लिएका छौं।
बजारमा ग्राहकका रूचिअनुसार थरिथरिका पार्केट पाइने निर्देशक ढकालले जानकारी दिए। घरको बजेटअनुसार महँगो मूल्य तिर्न तयार भए काठका गुणस्तरीय र जीवनभर टिक्ने पार्केट लगाउन सकिने ढकालको सुझाव छ।
'माथिल्लो सतहमा प्लास्टिक नराखी काठको स–साना टुक्राले भुइँ सजाइन्छ भने त्यो काठको पार्केटिङ हो,' उनले भने, 'यो विभिन्न साइज र रङमा पाइन्छ। इन्टेरियर डिजाइनरको सल्लाहमा रङ छनौट गर्दा उपयुक्त हुन्छ।'
६ मिलिमिटरदेखि १८ मिलिमिटर मोटाइसम्मका सिसौ र सल्लाका पार्केट टुक्रा बजारमा पाइन्छ। यो तीन सय पचासदेखि सात सय रूपैयाँ वर्गफिटसम्म पर्ने निर्देशक ढकाल बताउँछन्।
उनका अनुसार पार्केटको मूल्य काठको टुक्राको आकार र मोटाइमा भर पर्छ। तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको पार्केट ठूलोभन्दा आधाले फरक पर्छ।
'काठका टुक्रालाई फेबिकल लगाएर भुइँको सतहमा टाँस्नुपर्छ। ठूलो टुक्रा पार्केटमा लक सिस्टम पनि बनेको हुन्छ,' उनले भने, 'फिट गरिसकेपछि टल्काउन पोलिस गर्नुपर्छ। प्रत्येक सात–आठ वर्षमा पोलिस गर्दा सदावहार आकर्षक देखिन्छ।'
सिजनिङ (ट्रिटमेन्ट) गरेका काठ राखियो भने पसांगिने, बांगिने, कीरा-धुलिया लाग्ने समस्या नहुने उनी बताउँछन्। एकपटक काठको पार्केटिङ राखिसकेपछि डेढ-दुई सय वर्ष पनि केही नहुने व्यवसायीहरूले दावी गर्दै आएका छन्।
ढकाल भन्छन्, 'काठको जति नै आयु हुन्छ। बेलाबेलामा रङ लगायो भने खुइलिएजस्तो पनि देखिँदैन। पार्केटिङ गराउन दक्ष कामदार भने आवश्यक पर्छ।'
काठको धूलो (कुड) लाई मेसिनद्वारा बलियो गरी थिचेर प्लास्टिक लेमिनेसन गरी यो पार्केट तयार पारिएको हुन्छ। ८ मिलिमिटर र १२ मिलिमिटर गरी दुई मोटाइमा यो पार्केट बजारमा आउने ढकालले जानकारी दिए।
घरायसी प्रयोजनका लागि ८ मिमिको पार्केट प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै कार्यालय वा धेरै मानिस आवतजावत हुने, जुत्ता लगाएर हिँडिने, केमिकल प्रयोग गरेर सफा गर्नुपर्ने स्थानमा १२ मिमिको प्रयोग गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ।
'एकले अर्कालाई लक गर्दै ओछ्याउने हुँदा यो बलियो हुन्छ। पार्केट राख्नुअघि यसको सन्तुलन मिलाउन दुई मिमिको फम राख्नुपर्छ,' ढकालले भने, 'कम्पनीले विभिन्न गुणस्तर र ब्रान्डमा दस वर्ष वारेन्टीसहित यो पार्केट बजारमा ल्याएको छ।'
यो आठ इन्च चौडाइ र चार फिट लम्बाइमा कम्पनीबाटै तयार भएर आएको हुन्छ। भुइँमा मिलाएर राख्न लक सिस्टम हुन्छ। काठको तुलनामा सस्तो पर्ने लेमिनेटेड पार्केट धेरैको रोजाइमा परेको ढकाल बताउँछन्।
'पुरानो कार्पेट हटाएर पार्केट राख्ने उपभोक्ता पनि छन्। कार्पेटका विभिन्न असहजताकै कारण पार्केटमा आकर्षण बढेको भन्न गाह्रो छैन,' पार्केटको विशेषताबारे बताउँदै उनले भने, 'धूलो जम्दैन। पानी पोखिए पुछ्न सजिलो हुन्छ। खानेकुरा पोखियो भने टिप्न र सफा गर्न सजिलो छ।'
काठको धूलोबाट बनेकाले चिसो कोठा न्यानो राख्न र गर्मीमा शीतल पार्न सहयोग गर्ने ढकाल बताउँछन्। बजारमा लेमिनेटेड पार्केट चिल्लो र खस्रो सतह भएको पाइन्छ।
'बुढाबुढी, बालबच्चा भएका ठाउँमा चिप्लिन, लड्न सक्छन्। त्यसैले हामी खस्रो पार्केट लगाउन सल्लाह दिन्छौं,' उनी सुझाउँछन्, 'कार्यालयमा राख्दा चिल्लो नै राम्रो देखिन्छ। उपभोक्ताले आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुसार रोज्न सक्छन्।'
सामान्यतया गुणस्तर र मोटाइ हेरी यसको मूल्य एक सय पन्ध्र रूपैयाँ प्रति वर्गफिटदेखि दुई सय तीस रूपैयाँ वर्गफिटसम्मा यी पार्केट बजारमा उपलब्ध छ। बारम्बार पानी पोखिने स्थान जस्तै, भान्सा, बाथरूम, बरन्डा आदिमा भने यो पार्केट लगाउनु हुँदैन। निरन्तर पानीले काठ फुलाउँछ जसले गर्दा पार्केटिङको आयुमा असर पुग्छ।
माथिका दुइटाभन्दा पिभिसी पार्केट फरक हुन्छ। यसलाई 'प्लास्टिक टाइप' भनेर पनि बुझ्न सकिने ढकाल बताउँछन्।
यो पार्केट भने घरमा सबैतिर राख्न सकिन्छ।
'सबैतिर पार्केट राख्ने, भान्सा वा बरन्डामा नराख्ने गर्नाले अलि नसुहाउँदो देखिन्छ। त्यस्तोमा पिभिसी पार्केट राख्न सकिन्छ,' उनले भने, 'काठ र लेमिनेटेड पार्केटको तुलनामा यो केही नरम हुन्छ। निरन्तर पानीको सम्पर्कमा आउँदा पनि खास असर पर्दैन।'
चार फिट लम्बाइ र आठ इन्च चौडाइमा पाइने यो पार्केटको मूल्य एक सय पचास रूपैयाँ प्रति वर्गफिटदेखि सुरू हुने निर्देशक ढकालले जानकारी दिए। त्यस्तै सोही लम्बाइ-चौडाइमा ४.२ मिमि लक सिस्टम भएको पार्केट प्रतिवर्गफिट एक सय पचासदेखि दुई सय पाँच रूपैयाँसम्म, गुणस्तर हेरी बजारमा पाइन्छ।
पिभिसी पार्केटको कम्पनीले सामान्यतया दस वर्ष ग्यारेन्टी दिन्छन्।
जुनसुकै पार्केटिङ पनि राखिसकेपछि भित्ताहरूमा 'स्कर्टिङ' गर्नुपर्छ। यो भनेको पार्केटलाई काठको फ्रेम हालेजस्तै हो। स्कर्टिङ नगरेमा केटाकेटी भएका घरमा तानिदिने, हात लैजाने भएर उप्किन सक्छ। साथै धूलो जम्ने समस्या हुन्छ।
सुरूमा लगाउँदा कार्पेटका तुलनामा महँगो परे पनि गुणस्तर र आयु हेर्दा पार्केटिङ किफायती हुने ढकालको अनुभव छ।
आरामदायी घर बनाउन कति क्षेत्रफल आवश्यक पर्ला?
४ कोठे घर बनाउन इँटामा कति खर्च हुन्छ?
चार कोठाको घर बनाउन सिमेन्टमा कति खर्च लाग्छ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ४, २०७७, ०५:३५:००